Madaxweyne Xasan oo ka qeyb-galaya dabbaal-degga xorriyadda Sudan
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa goor dhowayd gaaray dalka Sudan si ay uga qeyb-galaan munaasabad loogu dabbaal-degayo sanad-guuradii 57-aad ee ka soo wareegatay markii dalka Sudan uu xorriyadda qaatay.
Madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisa waxaa magaalada Ad Damazin ee caasimadda gobolka Blue Nile State ku soo dhoweeyay dhiggiisa Omar Hassan al-Bashir.
Maalinta xorriyadda Sudan ayaa ku beegantay iyadoo maanta madaxweynaha Sudan uu xarigga ka jarayo biyo-xireenka Roseiris oo ballaarin lagu sameeyay si loo kobciyo wax-soo-saarka beeraha ee dalkaasi.
Al-Bashir ayaa khudbad uu ugu talagalay shacabka Sudan oo la xiriirta maalinta xorriyadda wuxuu ka jeedin doonaa magaalada Ad-Damazin.
Wufuud caalami iyo madax dowladeed oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka mid yahay iyo wakiillo ka socda hay’adaha ka qeyb-qaatay dib u dhiska biyo-xireenka ayaa isugu tagay magaalada Ad-Damazin.
Guddoomiye ku xigeenka gobolka Ble Nile Satate, Dr. Adam Abaker ayaa sababta uu gobolka u marti-gelinayo sanadkan xaflado sidaas u waa-weyn ku tilmaamay in la caddeeyo sida uu gobolku haatan u yahay mid ammaankiisa la isku hallayn karo oo nabdoon.
Dr. Adam ayaa soo dhoweeyay ballaarinta lagu sameeyay biyo xireenka, isagoo sheegay inay taasi door weyn ka cayaari karto kobcinta dhaqaalaha dalka Sudan iyo sare u qaadidda wax-soo-saarka beeraha ee dalka.
Madaxweyne Hassan al-Bashir ayaa kaddib marka uu xarigga ka jaro biyo-xireenka waxaa lagu wadaa inuu ka qeyb-galo dabbaaldagyo kale oo lagu weyneynayo maalinta xorriyadda dalkaas.
Waa booqashii ugu horreysay ee uu madaxweynaha Xasan Sheekh ku tago dalka Sudan oo ah dal xiriir fiican la leh Soomaaliya.